12 Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba ngololiwe eRashiya > 12 Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia
Uhambo loLoliwe, Ukuhamba ngololiwe eRashiya
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 29/06/2021)
Ngaphesheya kwetaiga yaseSiberia, elona chibi lakudala iBaikal, yasendle Kamchatka ukuya eMoscow, la 12 Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia ziyakuthatha umphefumlo wakho. Khetha nje indlela yakho yokuhamba, pakisha iiglavu ezishushu okanye idyasi yemvula kwimozulu ekhohlisayo, kwaye silandele eRashiya.
1. Iintaba zeAltai
Phakathi kweRashiya, Mongoliya, China, kunye nommandla waseKazakhstan Altai likhaya 700 amachibi, amahlathi, kunye nencopho ephezulu yaseSiberia ye-Mt Belushka, e 4506 m. IAltai ayinabemi baninzi, ke uya kuyifumana ingakhange ichaphazele mpucuko yanamhlanje, kwaye kuphela indalo yasendle kunye nezilwanyana zasendle ziya kukubulisa.
Ukwengeza, ukuba ungumhambi onomdla, emva koko uhambo oluya nakweyiphi na 1499 Umkhenkce eAltai uyakumangalisa. Ngaphezu, Rafting kweyona Katun kunye neBiya yimilambo ngamava amahle. Kwelinye icala, i-safari yezilwanyana zasendle inokuba yindlela yokuphumla ngakumbi. Unokufumana ithuba elinqabileyo lokuhlangana nengwe yekhephu, Ibhokhwe, I-lynx, nangaphezulu kune 300 iintlobo zeentaka. Akukho mathandabuzo, IAltai yenye yezona zibalaseleyo iindawo eziphila izilwanyana eYurophu kunye nendawo emangalisayo yokutyelela eRashiya.
IKazan lizulu loyilo kwiRiphabliki yaseTatarstan, entshona Russia. Iziko lehlabathi lesiTatar lime kwiindonga zeVolga, kunye nemilambo Kazanka, kwaye yajonga isixeko sesihlanu ngobukhulu eRashiya.
Njengoko kuchaziwe apha ngasentla, uyilo lweendawo eziphambili zeKazan ziya kubamba ukubona kwakho ngemibala yazo emhlophe naluhlaza kunye noyilo. Umzekelo, IKazan Kremlin, indawo yelifa lemveli, I-Kul Sharif Mosque, Epiphany Cathedral, ziindawo ezimbalwa onokuzityelela ukuze ufunde okungakumbi ngenkcubeko yamaTatar.
3. Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia: Lake zamanzi
Elona chibi lidala kwimbali yehlabathi, Ichibi leBaikal lenziwe 25 kwiminyaka ezizigidi eyadlulayo. Umkhenkce nobubanzi bawo benza iChibi iBaikal libe yindawo ebusika eSiberia, kwaye ehlotyeni, ungatsiba emanzini acocekileyo eYurophu, okanye ujonge izilwanyana zasendle ezinqabileyo emhlabeni.
Ukuhamba ngenqanawa, ndincoma indlela eseBaikal ehamba ngeenyawo, okanye ukuba ne-barbecue kunxweme lelona chibi limangalisayo eRashiya, uya kuba ne-adventure ekhwaza ingqondo. Imithi yepayini ejikeleze, ITaiga kunye nentlango zi uhambo ngololiwe ukusuka kwisixeko esikufutshane iIrkutsk, enye indawo enomdla ukuyityelela eRashiya. Ngaphezulu kwayo yonke into, ungaqala ukhenketho lwakho lweBaikal oluvela eTshayina okanye eRashiya, ngoololiwe baseTrans-Siberian, Ihlobo okanye ubusika.
4. E-Saint Petersburg
Isixeko saseTsars kunye nezigodlo ezaziwayo, ISaint Petersburg ikhuthaze iimbongi kunye nababhali. Ukuba khange uye eSaint Petersburg, awukayiboni iRussia, kuba esi sixeko sesinye sezona icon zidumileyo nezithandekayo zaseRussia.
IHermitage, UCatherine Catherine, Ibhotwe lasebusika, kunye neegadi zePeterhof, ziphefumla nje. Onke amanyathelo owathathayo aya kukutsala asondele kwiintsomi zaseRussia kwaye uya kukuonwabisa. Imbali ye-Saint-Petersburg kunye nokwakha kuyenza ukuba ibe yindawo yokundwendwela iRussia kwaye ngokuqinisekileyo yenye yezona ziphezulu 12 eyona ndawo imangalisayo eRashiya.
Ndalo, enkulu, entle, kwaye kuyamangalisa, IKamchatka ilinde wena phantse esiphelweni sehlabathi. Usingasiqithi Kamchatka kwi mpuma kude eRashiya, ekhaya phantse 300 iintaba-mlilo, uninzi luyasebenza, kunye neyona miboniso ibeka ingqondo kuLwandlekazi lwePasifiki nakwintlango yaseRussia. Bambalwa kakhulu abayaziyo imimangaliso yaseKamchatka, ke iKamchatka yeyona ndawo imangalisayo kwaye imangalisayo yokundwendwela iRussia.
Uya kubona ukuba akukho lula kangako ukufikelela kwimimangaliso yaseKamchatka, ngenxa yendawo ekude kuyo. kunjalo, xa usenza, uya kuthathelwa ingqalelo yindalo yokuqala, imimangaliso yendalo: i imithombo eshushu, imifula, izilwanyana zasendle, kwaye ngokuqinisekileyo ziintaba-mlilo. A Uhambo lweentaba-mlilo yenye yezona zinto zigqithisileyo nezichulumancisayo ukuzenza eKamchatka. Umzekelo, IKlyuchevskaya Sopka yeyona ncopho iphakamileyo kunye nentaba-mlilo esebenzayo, indawo oyifunayo yabahambi abaninzi eKamchatka.
6. Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia: I-Sochi
Kunxweme loLwandle oluMnyama, ingqongwe ziintaba eziluhlaza kunye neeholide, ISochi yeyona ndawo yokugqibela iholide yasehlotyeni eRashiya. ISochi ithandwa kakhulu kangangokuba isixeko sinomtsalane 4 Isigidi sabantu minyaka le, yabo ikhefu lasehlotyeni ngaselwandle.
Ukongeza kwi-sunbathing, I-Sochi Arboretum, okanye i-Itali encinci, ilungele iimbono zepanoramic zoLwandle oluMnyama kunye neSochi, Bazula egadini bebuka iipikoko.
Ukushwankathela, akukho ndawo ibhetele yeholide yokuphumla, ngesimbo saseRashiya, IRashiya kuneSochi. ngoko ke, Akumangalisi ukuba ungaya eSochi usuka eMoscow nakweyiphi na indawo eRashiya, kunye nakuMbindi weAsia nakwiMpuma Yurophu, ngololiwe.
UVeliky Novgorod unendawo ebekekileyo kuthi 12 ezona ndawo zimangalisayo zokundwendwela iRussia. Unokuthi iNovogrod enkulu kulapho iRussia yaba lilizwe elikhulu namhlanje. Emva kwi-9 ngekhulu, UVeliky Novogrod kulapho iNkosana uRurik, ngo 862 ubhengeze urhulumente waseRussia wangoku kwaye wenza i-Novogrod iziko lezorhwebo, idemokhrasi, kunye nokufunda nokubhala phakathi kweRashiya neBalkan.
ke, ukuba ukwimbali yaseRussia, UVeliky Novogrod kufuneka abe kuluhlu lwakho lwamabhakethi. Inqaba yaseNovogrod Kremlin, ICawa yaseSt. NoSophia balungile 2 zeendawo ekufuneka uzibonile eVeliky Novogrod ezokumangalisa. Imele 800 iminyaka, cinga nje ngamabali kunye neziganeko ezenzeka apha.
8. Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia: Isiqithi saseOlkhon
IChibi iBaikal likhulu kakhulu, ukuba kuye kwafuneka songeze enye indawo emangalisayo ekufuneka umntu eyindwendwele xa eseRussia. Isiqithi iOlkhon sesona siqithi sikhulu kwiLake Baikal, efanayo ngobukhulu kwiSixeko saseNew York. Isiqithi sinekhaya lokucinga ngamahlathi, indawo enamatye, kwaye kuphela 150000 abahlali, ngokungafaniyo neSixeko saseNew York.
kunjalo, Isiqithi iOlkhon yindawo edumileyo yabakhenkethi kwiChibi iBaikal. Oku kuthetha ukuba ehlotyeni ungaya kudada emanzini acwengileyo acwengileyo echibi kwaye ungene emanzini kwelona chibi linzulu emhlabeni. Ebusika, kwelinye icala, ungalithanda elona chibi lidala emhlabeni, kwisinxibo sayo sasebusika, efriziwe kwaye intle ngomhlophe.
Isiqithi sihamba ngesikhephe ukusuka eSakhuyurta kwaye abantu baseBuryat bakholelwa ukuba banjalo 1 Iipali ezintlanu zehlabathi zamandla eShamanic. Inyaniso, unokufumana amatye e-shaman kumbindi wesiqithi.
Ukuba ukuhambo lwakho lweTrans-Siberian, emva koko uya kuma eIrkutsk, ikomkhulu elingekho semthethweni leMpuma yeSiberia. 19Iinkulungwane ze-Russia iicawa, izindlu ezenziwe ngombala omdaka nohlaza, I-Taiga yaseSiberia, Irkutsk - isixeko esihle zembali.
Ngaphezu, I-Irkutsk yayikhe yayindawo yokuthinjelwa kwezidwangube ezininzi zaseRussia kunye neengqondi eSiberia, ukuba urhulumente olawulayo uthathe isigqibo sokuchasana negunya. ke, I-Irkutsk kunye ne-taiga yaseSiberia zibonisa imisebenzi emininzi yaseRussia yemibongo kunye noncwadi. Na lyo line, Namhlanje i-Irkutsk sisixeko esihle: ibhloko 13 yezindlu ezenziwe ngomthi ngenkulungwane ye-18, iBandla loMsindisi, kwaye igalari yeBronshteyn zimbalwa zeendawo ekufuneka uzityelele.
10. Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia: Indawo yokuGcina izilwanyana yaseStolby
Kunxweme loMlambo iYenisei, Indawo yolondolozo lwendalo ibekwe emazantsi esixeko saseKrasnoyarsk. Ugcino aluwi buhle obuvela kwi phezulu 5 uninzi lweendawo zolondolozo lwendalo eYurophu. Emva kohambo olude kuloliwe waseTrans-Siberian ukuwela iRussia, uyakufumanisa ukuba ukubhadula ujikeleza uvimba kuphakamisa imimoya yakho ivuse umzimba kunye nomphefumlo oleleyo.
I-Stolby inayo 5 iindlela eziphambili ezinekhowudi, ngoko awuyi kulahleka kwiindlela ezininzi ezincinci zehlathi. Nje ukuba ufike nzulu ehlathini, uya kufumanisa indawo yogcino yemvelaphi. Nazi 100 Iintsika zamatye ezinqabileyo, impressive and tall clusters of stolby amidst the trees.
Ukutyelela le paki yendalo intle konke kukuzonwabisa kokona kulungileyo kwendalo. Akukho nto ifana nevumba kunye neembono zamahlathi aseRussia, ehlotyeni okanye ebusika. kunjalo, ukuba ucwangcisa uhambo lwasebusika isikhumbuzi esikhawulezayo sokunxiba amanqanaba amaninzi, njengoko iSiberia ibanda kakhulu kwaye ikhephu.
Imibala yeArbat, IKremlin kunye neRed Square, st. Icawa yaseBasil, kunye nomlambo iMoskva, inqaku kuyo yonke ikhadi lokuposa, umfanekiso, kunye nesiqwenga malunga neMoscow. kunjalo, kuphela ude ubeke unyawo lwakho kwezi ndawo zimangalisayo, ukuba uyabuxabisa ngokwenene ubukhulu kunye nobuhle bazo. Akukho mathandabuzo malunga nomtsalane omhle waseMoscow. ke, ayothusi into yokuba ikomkhulu lelinye 12 ezona ndawo zimangalisayo zokundwendwela iRussia.
Ngelixa iMoscow ibukeka, isixeko esingaphantsi komhlaba sezikhululo zeMetro sikhazimla ngokulinganayo. Isixeko uhambo lokuhamba kwindawo ephantsi komhlaba eMoscow yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwenza eMoscow. Apha, uya kufumana iitoni zolwazi malunga nobugcisa, design, nembali yesikhululo ngasinye, kunye nesixeko, kubantu bendawo.
12. Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia: Isiqithi saseKizhi
Iicawa ezenziwe ngomthi, inqaba yewotshi enamacala amabini iphelele ngokhuni, Yenza i-Kizhi Pogost eyahlukileyo. Esi sakhiwo singaqhelekanga sezinto ezenziwe ngamaplanga senziwa ngabachweli, kwesinye seziqithi eLake Onega. Uya kumangaliswa kukwazi ukuba olu hlobo lweemodeli lwaludumile kumaxesha amandulo. Ezi zithuba zomthi zazizizithuba ezithandwayo zepherishi kwinkulungwane ye-16, kwaye mhlawumbi ngaphambili.
Ngelixa iicawa zingengombono onqabileyo eRashiya, iicawa zamaplanga zinjalo. Isiqithi saseKizhi ngumzekelo omangalisayo wamagcisa aseRussia. Isiqithi saseKizhi yi indawo zamagugu UNESCO, nomnye wemimangaliso yehlabathi, njengobunzima bonke, ingena ngokumangalisayo kubume bendalo.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo kwezi 12 iindawo ezimangalisayo eRashiya ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog " 12 Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia "kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Famazing-places-visit-russia%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha ru to / fr iilwimi / okanye / de yaye ngaphezulu.
#russia AmazingRussia Ibandla LakeBaikalrussia eMoscow Mostbeautifulplacesinrussia SaintPetersburg Siberia TranSiberiantrain TravelRussia VisitRussia
Top 5 Best Cities ukuchitha Christmas
Uhambo loLoliwe, Qeqesha uhambo eFrance, Train Travel Holland, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe eSweden, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
23 Zokusebenza You Need Umxokozelo Ngaphambi Ukuhamba
Ukuqeqesha ngezimali, Uhambo loLoliwe, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe